Fahasamihafàna, Voasakana: Simban’ny Ady Masina Amin’ny Pelaka Ny Endrika Fandeferan’i Okraina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Jona 2017 10:55 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Ελληνικά, 日本語, Español, English
Loharano: Aleksandr Nosenko, Instagram.
Koa satria miditra amin'ny herinandro farany ny Fifaninanan-Kira Eurovision amin'ity taona ity, nisy andohalambo miendrika avana miloko amin'ny ampahany natao ho fanamarihana ny teny fanevan'ilay hetsika, “Ankalazao ny Fahasamihafàna”, nanidintsidina toa mampatahotra teny ambonin'ny afovoan-tanànan'i Kiev.
Rehefa nitaraina ireo mpitarika avy ao amin'ny ny hery farany havanana fa mitovy amin'ny hetsi-panentanana ho an'ny fifankatiavan'olon-droa mitovy fananahana ilay asa maroloko, dia najanon'ny tanàna tampoka ny fanamboarana ilay andohalambo lehibe, izay niova anarana ho “Andohalambon'ny Fahasamihafana” ho an'ny Eurovision (raha “Andohalambon'ny Fihavanam-pirenena” no nahafantarana azy teo aloha, ary natokana ho amin'ny firaisan'ny Rosiana sy ny Okrainiana tao anatin'ny Firaisana Sovietika).
Natao ho fampatsiahivana ilay ady tsy mety vita ao Okraina enti-manohitra ny fankahalàna ny fifankatiavan'olon-droa mitovy fananahana io tsangambato tsy vita io—olana izay nohamafisin'ny fitroaran'ireo fanafihana enti-manenjika ny fiarahan'olon-droa mitovy fananahana vao haingana izay.
Araka ny voalazan'i Anna Sharyhina, Okrainiana mpikatroka mafana fo ao anatin'ny LGBT sady Talen'ny Fandaharanasan'ny KyivPride, dia vondronà milisy maro manerana ny firenena no nanamafy ny fanenjehany ireo mpifankatia mitovy fananahana, izay mazàna dia raisina ho mpitsiriritra zaza, tanatin'ireo volana lasa. ” Lahatsary an-jatony avy any Zaporozhye, Nikopol sy avy any amin'ireo tanàna hafa no efa ao anaty aterineto, ary mbola betsaka no ho avy. Tena zava-dehibe ny firaisankina sy ny fijoroana ho fanoherana ireo heloka bevava mampiseho fankahalana,” hoy izy nanoratra tao amin'ny Facebook tamin'ny 11 Aprily.
Ireo fikambanana ireo, izay mihodina manodidina ireto anarana antsoina hoe Naslediye (“Lova”) sy Modnyi prigovor (“Fitsaràna ny lamaody”) ireto, no famadihan'i Okraina ho azy ny “Occupy Pedophilia” (Bodoy ny Fitsiriritan-jaza), hetsika Rosiana notarihin'ilay neo-nazi Maxim Martsinkevich izay nalaza tamin'ny anarana hoe Tesak (midika hoe “Famaky” amin'ny teny rosiana). Nanomboka tamin'ny 2012, dia ireo pelaka sy ireo tia lahy sy vavy no lasibatry ny Occupy Pedophilia amin'ny alàlan'ny media sosialy sy ireo vohikala fitadiavan'olon-tiana, mody manao zaza tsy ampy taona ry zareo mba handaminana ny fotoana hihaonana. Rehefa mihaona, darohana sy alàna baraka ireo olona ireo, haratana sy lokoina ny lohany raha sady terena ho mody manao firaisana ara-nofo amin'ny vava sy hilaza ny antsipiriham-piainany manoloana ny fakantsary ry zareo. Avy eo aparitaka anaty aterineto ireo lahatsary.
Tamin'ny 2013, tonga tao Okraina ity “hetsiky ny mpikatroka mafana fo” ity, izay nomena anarana hoe Holubyatnya Het’!, na “Mivoaha Ry pelaka !”.
Nanaraka ny dian'ny Occupy Pedophilia ireo milisy Okrainiana ireo. Ao amin'ny Vkontakte ohatra, dia milaza ny tenany ho “hetsika sosialy mikendry ny hampiharihary ireo olona izay manitsakitsaka ny fahamendrehan'ny ankizy” ny Naslediye-Zaporozhye (Lovan'i Zaporozhye). Amin'izao fotoana izao, an-jatony maro ireo lahatsary navoaka ahitàna ireo niharan-doza, izay ny ankamaroany dia toa vao voadaroka vao haingana, noterena hilaza ny anarany feno, ny adiresiny, ny andro nahaterahany, ny toeram-pianarany na fiasàny – sy ny mombamomba ireo fironany ara-pananahana ary ireo traikefa ananany.
Na dia milaza ho mpiaro ny vahoaka aza ireto vondrona ireto, dia manimba aina sy mampidi-doza ny vondrom-piarahamonina LGBT ny paikadiny mahery setra sy tsy manara-dalàna, miaraka amin'ireo lahateny manambany. Mampiroborobo ny kolontsain-tahotra sy fankahalana ireo olona LGBT anatinà firenena izay efa mampifangaro ny fifankatiavan'olon-droa mitovy fananahana amin'ny fitsiriritana zaza tsy ampy taona, ny fanaparitana ireny lahatsary ireny amin'ny sehatry ny media sosialy. Omen'io famantarana ho milisy dizitaly io hery kosa ireo hafa hanao heloka bevava mampiseho fankahalàna – na izany mifototra amin'ny fironana ara-pananahana, na ny fihaviana ara-poko, na ny finoana ara-pivavahana.
Indrisy, tsy ireo vondrona voaomana irery ihany no mandrahona ireo zo sy ny fiarovana ny vahoaka LGBT ao Okraina. Tamin'ny 6 Mey, nikarakara ny “Rainbow Flash Mob” tao amin'ny tanànan'i Zaporozhye ao Atsimon'i Okraina ilay fikambanana tsy mitady tombontsoa, “Gender Z”, izay nilanjan'ireo mpikatroka mafana fo tao an-toerana sorabaventy hoe “Ankalazao ny Fahasamihafàna”, voaravaka marika ahafantarana ireo vondrona samihafa atao an-jorombala. Taorian'ilay fihetsiketsehana, mpandray anjara telo no notafihana sy nodarohan'olon-tsy fantatra.
Nandritra izany fotoana izany, mpankafy Eurovision an'aliny no tafavory tao Kiev, mba hifaly amin'io teny faneva izay nampiditra hôpitaly ny mpikatroka mafana fo iray ao amin'ny Gender Z io.
Afaka hijery ilay andohalambo ratsy vintana miendrika avana ihany koa ireo mpitsidika ireo hatramin'ny 15 Mey. Na dia ho voadio aza ny lokon'ilay tsangambato aty aoriana, ny fifanolanana ara-potokevitra miafina izay asehony kosa dia tsy ho voafafa. Miaraka amin'ny fetiben'ny LGBT andiany fahenina fanaon'ny KyivPride isan-taona izay atao afaka iray volana monja, mbola mipetraka ny fanontaniana: hanaiky ny fahasamihafàna amin'izay ve ny fiarahamonina Okrainiana—sa mbola hanohy hamela izany ho voafafa?